आफ्नो श्रीमान परस्त्रीसँग सल्केको कसरी थाहाँ पाउँने ? - Movies Club Nepal
Home Mixed Bag	आफ्नो श्रीमान परस्त्रीसँग सल्केको कसरी थाहाँ पाउँने ?
by Movie Club Nepal ११ बैशाख २०७६, बुधबार १४:२६ October 10, 2019
हरेक महिलाको मनमा यो शंका हुन्छ कि आफ्नो पतीले आफु भन्दा बाहेक अरुसँग यौन सम्बन्ध राख्छ कि राख्दैंन । यो शंका महिलाहरुको मात्रैं होईन पुरुषहरुले पनि महिलामाथि शंका गर्दछन । आज हामी यसको बारेमा कुरा गर्नेर्छौ । कम उमेरमा पोर्न अर्थात अश्लिल फिल्म हेर्ने पुरुषमा उमेर बढ्दै गएपछि त्यसको असर देखिने अमेरिकी शोधकर्ताहरूले दावी गरेका छन् । नेब्रास्का युनिर्भरसिटीका शोधकर्ताहरूले गरेको अनुसन्धान अनुसार जति कम उमेरमा पुरुषले अश्लिल फिल्म हेर्छन अरुको तुलनामा त्यति नै कम उमेर मै महिलाप्रतिको आकर्षण बढ्ने बताइएको छ ।
करिब २० वर्ष उमेर समूहका ३३० अण्डरग्रयाजुएट विद्यार्थीमाथि सर्भे गरिएको थियो । उनीहरूले औसतमा १३ वर्षमा नै अश्लिल फिल्म हेरिसकेका थिए । अध्ययनमा सहभागी मध्ये एक जनाले ५ वर्षमै पहिलो पटक ‘पोर्न’ फिल्म हेरेका थिए । अर्को एक जनाले २६ वर्षको हुँदा मात्र पहिलो पटक अश्लिल फिल्म हेरेको बताएका थिए ।
सर्भेबाट प्राप्त यो आँकडा अहिलेसम्म कतै प्रकाशित नगरेको अमेरिकाको वासिङ्टनमा आयोजित एक कार्यक्रममा शोधकर्ताहरूले बताए । मुख्य शोधकर्ता एलिसा बिसम्यान तथा उनको टीमले पुरुषसँग मात्र प्रश्न सोधेको बीबीसीले लेखेको छ । प्रश्नको जवाफ दिने अधिकांश हेट्रोसेक्शुयल थिए जसले पहिलो पटक झुक्किएर अथवा जानजानी पोर्न फिल्म हेरेका थिए । शोधका क्रममा उनीहरूलाई ४६ ओटा प्रश्न सोधिएको थियो ।
त्यसैको आधारमा शोधकर्ताको दावी छ की जति सानो उमेरमा अश्लिल फिल्म हेर्यो उत्ति नै सानो उमेरमा यौन उत्तेजना जाग्ने, महिलाप्रति आकर्षण र प्ले ब्वाई समेत हुने बताइएको छ । विभिन्न अध्यनहरुबाट के कुरा खुल्न आएको छ भने नेपाल लगायतका देशहरुमा पछिल्लो समय यौनइच्छा तिव्र भएका पुरुषहरुको संख्या बढ्दो छ ।
संसारमा सबैंभन्दा धेरैं अश्लीलता पश्चिमा र केही विकसित मुलुकहरुमा रहेको पाइएको छ । शोधले सानो उमेरमा पोर्न फिल्म हेर्नेले वास्तविक जीवनमा यौनसुखको अनुभूति गर्न नसक्ने र उमेर बढेपछि पोर्न फिल्म हेर्नेहरूमा भने धेरै यौन चाहना हुने र यौनपार्टनर बदल्ने स्वभाव देखिएको जनाएको छ ।
विवाहको पहिलो रात यौन सम्बन्ध राख्ने कि नराख्ने ?
यौन समागम मा कसरि लिने
२३ माघ २०७५, बुधबार १३:४३
सम्भोग बारे अचम्म लाग्ने अनौठो तथ्यहरु
२३ माघ २०७५, बुधबार १५:२३
ठीक कि बेठीक मुख मैथुन ?
१५ मंसिर २०७५, शनिबार १२:४८
केटीलाई पटक्कै मन नपर्ने केटाका १० बानीहरु
११ बैशाख २०७६, बुधबार १२:२८
महिलाहरू यस्तो कुरा सुन्न मन पराउँछन् !
२३ माघ २०७५, बुधबार १५:०६
के चाहन्छिन् महिला यौनसम्पर्कपछि
१२ माघ २०७५, शनिबार २०:२१
महिनावारीको वेला यौन सम्पर्क राख्दा के हुन्छ ?
६ फाल्गुन २०७५, सोमबार १०:०२
बलात्कारीलाई पुरस्कार दिने देश
१० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार १०:०६